Sida loogu daro saamaynta hooska sawiradaada GIMP | Abuurista khadka tooska ah
Inbadan, GIMP waa bedelka la door bidaa markay tahay software tafatirka sawir la mid ah Photoshop. Waa barnaamij bilaash ah oo dhammaystiran xaqiiqaduna waxay tahay inay ku jiraan qalab iyo shaqooyin badan oo u oggolaanaya natiijooyin tayo sare leh dhawr tallaabo oo keliya. Tusaale ahaan, hoos waxaan ka arki doonaa sida loogu daro hooska saamaynta sawirrada ama xitaa qoraalka oo loo abuuro dhalanteed aad u qurux badan oo saddex-geesood ah.
Ugu horreyntii, waa inaan fureynaa sawirka aan dooneyno inaan ku daboolno saameynta hooska ama, haddii loo baahdo, la abuuro dukumiinti cabirka loo baahan yahay, haddii aan ku shaqeyn doonno qoraalka.
Markaanu rarnay sawirka GIMP, waxa soo socdaa waa wax iska fudud, si kastaba ha noqotee waxay kuxirantahay waxa aan dooneyno inaan sameyno talaabooyin dheeri ah ayaa loo baahan karaa.
Haddii aan kaliya dooneyno inaan hoos u dhigno sawirka annaga oo ilaalinayna asalkiisa, kaliya waa inaan tagnaa liiska "Filters", ka dibna riix "Laydhka iyo hooska" iyo ugu dambeyn "Drop shadow".
Jadwalka hoose ku yaal waxaan lahaan doonnaa qiimayaal dhowr ah oo aan ku hagaajinno la xiriirta barakicinta hooska ee X ama Y, marka lagu daro shucaaca isku-darka, midabka hooska iyo daah-furnaantiisa.
Qiimayaashani waxay ku xiran yihiin isticmaalaha, si kastaba ha noqotee waxaa lagu talinayaa in qiimaha jaangooyada ee X iyo Y ay noqdaan kuwo la mid ah ama ugu yaraan aan ka duwanaan, halka mugdiga iyo shucaaca ay ahaanayaan kuwo aan isbeddelin.
Marka iswaafajinta u dhiganta la sameeyo, waa inaan si fudud u gujino "OK" si aan hooska ugu dhigno sawirkeena.
Waxaan sidoo kale ka saari karnaa asalka sawirka ka dibna ku dabaqi karnaa saameynta hooska dulucdeeda kadibna waxaan u keydin karnaa sida sawirka PNG.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Sida loogu daro saamaynta hooska sawiradaada GIMP